Sigatoka, Western Division, i-Fiji
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Mazid
Bula! Izwa isiqhingi esiphezulu esishisayo esihlala nosebe lolwandle oluwuhambo lweminithi elingu-1. Ifulethi lokulala eli-2 lilungele umndeni, umbhangqwana noma eyodwa. Kusogwini lwamakhorali futhi kuyimizuzu emi-5 nje ukushayela ukusuka eSigatoka Town. Isondele kuzo zonke izindawo zokungcebeleka ezinkulu nezindawo zokudlela, imizuzu emi-5 ukushayela ukusuka e-outrigger echibini laseFiji. Indawo esiyinikezayo iyifulethi elingaphansi endlini lapho sihlala khona efulethini eliphezulu. Indawo ibiyelwe ngokuphelele futhi isigatshana sihlala eduze komgwaqo iQueens Highway.
Indawo yethu izungezwe izingadi kanti ifulethi eliphansi linethala elibheke ezingadini. Kukhona indawo yokuphumula ebanzi nendawo yokudlela. Kukhona ikhishi elivulekile ukuze ukwazi ukupheka ngendlela othanda ngayo. Kukhona ishawa nethoyilethi elijwayelekile kanti Elinye lamakamelo okulala angu-2 yigumbi lokulala elikhulu eliza neshawa yangasese. Indawo ibiyelwe ngokuphelele futhi ukuphepha kwakho nokunethezeka kwakho kuyizinto eziza kuqala kithi.
4.85(20 okushiwo abanye)
Ukuhlukaniswa kwethu kuyindawo ekahle yezivakashi njengoba iseduze nolwandle. Ukudlala i-snorkeling, ukubhukuda noma ngisho nokuhamba ngezinyawo olwandle kuwuhambo oluyiminithi nje ukusuka ekhaya. Indawo iyimizuzu emi-5 nje yokushayela usuka Edolobheni laseSigatoka kanye nemizuzu eyi-10 ngokushayela usuka eSigatoka Sand Dunes. Iseduze nezindawo zokudlela nezindawo, indawo yokubuka ulwandle kanye ne-spa isesigabeni esifanayo kanye nebanga elingamaminithi angu-3 ukusuka eSitar Restaurant & usuka e-Outrigger eLagoon Fiji. I-Kula Eco Park nayo iyi-6 min drive away.
Bula ’m Mazid, a retired school teacher, and stay in the top flat with my wife, on the same property. Since we’re just on the top flat, we’re always here if you need anything. I like gardening, fishing and socializing.
NginguMazid, uthisha wesikole osewathatha umhlalaphansi, futhi ngihlala efulethini eliphezulu nomkami, endaweni eyodwa. Njengoba sisefulethini eliphezulu, sihlala silapha uma kukhona okudingayo. Ngithanda ingadi, ukudoba kanye nokuzijabulisa. Izivakashi zethu zingase zikhethe ukuthi zingathanda yini ukulayishwa ziphinde zehlise izinsiza esikhumulweni sezindiza saseNadi uma zithanda, ngezindleko ezengeziwe. Futhi singakuhlelela izinsizakalo zemoto eziqashisayo, uma kwenzeka uyidinga.
NginguMazid, uthisha wesikole osewathatha umhlalaphansi, futhi ngihlala efulethini eliphezulu nomkami, endaweni eyodwa. Njengoba sisefulethini eliphezulu, sihlala silapha uma kukho…
UMazid Ungumbungazi ovelele